Mesenteric lymphadenitis (အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Mesenteric lymphadenitis (အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Mesenteric lymphadenitis (အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း)
Mesenteric lymphadenitis (အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်းဟာ ကလေးတွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ အဓိက အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတမျိုး ဖြစ်ပြီး ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လင့်ဖ်အကြိတ်တွေကို ရောင်ရမ်းဖောင်းကားလာစေပါတယ်။ လင့်ဖ်အကြိတ်ဆိုတာဟာ ပဲစေ့အရွယ် သေးငယ်တဲ့ အင်္ဂါလေးတွေဖြစ်ပြီး လင်ဖိုဆိုက်လို့ခေါ်တဲ့ သွေးဖြူဥတမျိုး ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီအကြိတ်တွေဟာ လင့်ဖ်ပြန်ရည်ကြောစနစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပဲ ဖြစ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်မှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာ လင့်ဖ်ပြန်ရည်မှာ ပါဝင်လာတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ အခြားသော ပိုးမွှားတွေကို စစ်ထုတ်ပေးတာမို့ အဆိုပါ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာတွေကို ခန္ဓါကိုယ်ကနေ ဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း ရောဂါဟာ အူနဲ့ ဝမ်းဗိုက်နံရံကို ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ တစ်ရှူးတမျိုး (mesentery)မှာပါဝင်တဲ့ လင့်ဖ်အကြိတ်တွေကို ထိခိုက်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mesenteric lymphadenitis (အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Mesenteric lymphadenitis (အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ဗိုက်ညာဖက်အောက်ခြမ်း သို့မဟုတ် အခြားသော ဝမ်းဗိုက်နေရာများမှာ နာကျင်ခြင်း။
သင့်ကလေး အအေးမိခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ဝေဒနာများ ခံစားရပြီးနောက်မှာ အထက်ပါလက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ မကြာခဏ ဗိုက်အောင့်လေ့ရှိပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ပြင်းထန်ဆိုးရွားလေ့ မရှိပါဘူး။
အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် ဆိုးရွားစွာ ဗိုက်အောင့်လာခြင်း။
အဖျားတက်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊အန်ခြင်း၊ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းတို့နှင့် အတူ ဗိုက်အောင့်လာခြင်း။
Mesenteric lymphadenitis (အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သင့်ဝမ်းဗိုက်အတွင်း ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် အူအမြှေးပါးနဲ့ တဝိုက်မှာရှိတဲ့ လင့်ဖ်အကြိတ်တွေကို ရောင်ရမ်းဖောင်းကားလာစေနိုင်ပါတယ်။ အူအမြှေးပါးဟာ အူနဲ့ ဝမ်းဗိုက်နံရံကို ဆက်ပေးထားတဲ့ တစ်ရှူးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ခံစားရတဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယား၊ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ အခြားသော ပိုးမွှားတွေဟာ လင့်ဖ်အကြိတ်တွေကို ဖြတ်သန်းပြီးဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဆိုပါ အကြိတ်တွေကို ရောင်ရမ်းဖောင်းကားလာစေပါလိမ့်မယ်။
လင့်ဖ်အကြိတ်တွေဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ခုခံအားစနစ်မှာ တစိတ်တပိုင်း ပါဝင်နေပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ဘက်တီးရီးယား၊ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ အခြားသော ပိုးမွှားတွေကို ဖမ်းဆီးဖယ်ရှား ရှင်းလင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် သင်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်မယ့် ဘေးကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဖျားနာတဲ့အခါ လည်ပင်း ဒါမှမဟုတ် အခြားနေရာတွေက လင့်ဖ်အကြိတ်တွေပါ ကြီးလာတယ်လို့ တခါတရံ ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယား၊ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေက ဒီအခြေအနေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံး ပိုးမွှားတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အစာအိမ်နဲ့အူရောင်ခြင်း ဖြစ်ပွားအပြီးမှာလည်း အူအမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါတွေ ခံစားပြီးချိန်မှာလည်း ဒီရောဂါ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။Yersinia enterocolitica ဘက်တီးရီးယားပိုး ပါဝင်နေတဲ့ (အသေအချာကျက်အောင် ချက်ပြုတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့)ဝက်သားကို စားမယ်ဆိုရင်လည်း ကလေးတွေအနေနဲ့ အူအမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ရမ်းခြင်း ဝေဒနာကို ခံစားရလာနိုင်ပါတယ်။
Mesenteric lymphadenitis (အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အူအမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အူအမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပေမယ့် ကလေးတွေမှာ အဓိက ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရအပြီးမှာ ကလေးတွေအနေနဲ့ အူအမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်ကို ထိခိုက်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရခြင်း။
အအေးမိဖျားနာစေသော ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရခြင်း။
Y. enterocolitica ပိုးပါဝင်နေတဲ့ ဝက်သားစားမိခြင်း။
Mesenteric lymphadenitis (အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ကလေး ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေအကြောင်းကို ဆရာဝန်က မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ကလေးအနေနဲ့ လတ်တလော အအေးမိထားခြင်းရှိမရှိ၊ဗိုက်နာဗိုက်အောင့်ခြင်း ရှိမရှိ၊အခြားသော ကူးစက်ရောဂါခံစားရခြင်းများရှိမရှိကိုလည်း ဆရာဝန်က မေးမြန်းပါလိမ့်ဦးမယ်။ ကလေးရဲ့ ဗိုက်မှာ တင်းနေ၊နာနေတဲ့ နေရာ ဒါမှမဟုတ် ဖောင်းနေတဲ့နေရာ ရှိမရှိ သိနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ အကယ်၍ အကြိတ်ရောင်နေ၊ကြီးနေတာမျိုးရှိရင်လည်း သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်က သင့်ကလေးရဲ့ ဗိုက်ကို စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကလေးရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ ကူးစက်ပိုးမွှားရှိမရှိ သိနိုင်ဖို့အတွက် သွေးစစ်တာမျိုးလည်း လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဗိုက်ထဲက အကြိတ်တွေ ကြီးမကြီး သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးနည်းကို အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးတာမျိုးကိုလည်း လုပ်ဖို့ လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အူအမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ရမ်းတာလား ဒါမှမဟုတ် အူအတက်ရောင်တာလား ဆိုတာကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ စစ်ဆေးမှုတွေကို သင့်ဆရာဝန်က အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
CT ရိုက်တယ်ဆိုတာဟာ အားကောင်းတဲ့ X-ray ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုပြီး ဝမ်းဗိုက်အတွင်းပိုင်းရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ရိုက်ယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီဗေးရှင်းဓါတ်မှန် (ultrasound)ကတော့ အသံလှိုင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး ဝမ်းဗိုက်အတွင်းပိုင်းရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ရိုက်ယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Mesenteric lymphadenitis (အူ အမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အူအမြှေးပါးလင့်ဖ်အကြိတ်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ ဘာကုသမှုမှ မခံယူရင်လည်း ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ စတင်သက်သာလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာဆိုရင်တော့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေ သုံးစွဲဖို့ လိုအပ်မှာပါ။ သင့်ကလေး နာကျင်မှုသက်သာစေဖို့အတွက် ဆရာဝန်ဆေးစာမလိုဘဲ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ (ဥပမာ ibuprofen (Advil, Motrin) or acetaminophen (Tylenol))ကို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးလက္ခဏာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ အက်စ်ပရင်ဆေးပြား မပေးသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အက်စ်ပရင်ဟာ ကလေးနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး ရှားပါး ပြင်းထန်တဲ့ Reye syndrome အမည်ရ ရောဂါတမျိုးနဲ့ ဆက်စပ်နေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Mesenteric lymphadenitis. https://www.healthline.com/health/childrens-
health/mesenteric-adenitis#symptoms2. Accessed October 26, 2017
Mesenteric lymphadenitis. https://www.webmd.com/children/mesenteric-
lymphadentitis#1. Accessed October 26, 2017